Last updated: Chivabvu. 25 2018 | 2 Maminitsi verenga
Tine zvose kumboona vakaroorana kutaura tsvina mumafirimu, TV uye kunyange kuriverenga mumabhuku asi zvine kunyange kushanda? Uye zvakakoshesa, Unofanira kusuma hurukuro dzakasviba kupinda ukama hwako?
Kusiyana nezvinofungwa nevakawanda, kana kutaura tsvina haumanikidzwe kutaura chinhu shamisa kana kunze uko kuti ndiwane achida kushanda. Nekutevera pazasi mazano, unogona kuwedzera zest kuti ukama hwako uye zvepabonde upenyu vachiri kuva imi.
Adding Spice: Kungofanana zvinonhuhwirira kuwedzera munuhwi kuti kubika, tsvina kutaura anowedzera munuhwi ukama. zvisinei, Unofanira kungwarira sezvo kutaurisa rakasviba, sezvakangoita rakawandisa zvangu, achawana anofinha uye anogona kunyange kuparadza ukama hwako. Kuwedzera kufara uye mafaro, edza kurishandisa zvishoma nenzira zvichava zvinonakidza uye zvisingatarisirwi nguva dzose zvaunoita kutaura tsvina kuti mudiwa wako.
Stay pakanaka: Chinonyanya kukosha muromo ndiko kuita uye zvauchafanira achinyatsoita. Kana zviri yakajeka kana anokunyengedzera, kana uri wakanyanya kugadzikana vachiti ipapo ingangova icharira netsa zvakare. Uye kuva vakatendeseka zvakakwana, pane zvinhu zvishoma kupfuura nehurukuro dzakasviba netsa.
Iva dzisinganyatsooneki: yakajeka, bhowa, seksikäs, uye hurukuro tsvina hwakajeka kukuru nokuti yokurara sezvo inogona kutungamirira wakazadzwa pabonde. Asi kana uri dzisinganyatsooneki kana kutaura tsvina, uchaona kuti achasika yakasimba zvinozoita sezvazvakanyorwa anosika pabonde makakatanwa Kuwedzera pakuita mumwe wako nguva dzose funga pamusoro pako. kuva dzisinganyatsooneki, saizvozvo, zvinogona chaizvoizvo kuva nesimba kupfuura yakajeka kana kutaura tsvina.
Chimwe chinokosha nezvehurukuro tsvina dzisinganyatsooneki ndechokuti unogona kuzviita chete inenge chero. Kubva zvekodzero yakarembera neshamwari kuti kuva kubasa, iri nyore “Ini dai izvi vamwe vanhu vakanga vasiri kumativi sezvo ndine zvimwe zvinonakidza zvinhu mupfungwa kuti ndinoda kuita kwamuri”, achasiya mumwe wako achishamisika pamusoro chii chaizvo here kufunga.
yakajeka, yokurara hurukuro: Nepo muromo ndiyo chaiyo pakatarisana kubva apa, Hurukuro dzakasviba hwakajeka achaita bonde chaizvo, paunowana, uye zvikuru wakazadzwa – chaizvo munhu chii angada mumba mokuvata. Musarega shoko yakajeka kutungamirira kukubvisa ichi tamba, seksikäs yokurara hurukuro. Simply kubatwa riri pakarepo uye kutaura zvauri sokuti “uchinzwa mukati mangu saka zvakanaka”, ndichatambanudzira kwete chete nomumwe wako pamusoro asi kwiza egos uyewo. Kana uchiri kunzwa kusagadzikana kana netsa, zvikuru “Aaa”, “hongu”, uye “oh mwari” zvinopawo zvimwechetezvo.
Erotica: Zvichida nyore muromo ndeyokuverenga erotica kana rudo enganonyorwa. Kwete chete Vachaita kuwedzera yenyu rakasviba kutaura repertoire asi vachakupai mazano akawanda ezvinhu, basa kutamba, uye mitsetse kuwedzera achikusiyirai akatendeuka iwe kunyanya pashure kupedzisa kuverenga kwititika chinosiririsa.
Ungave wave nomumwe wako kwemwedzi mishoma kana makore gumi, kutaura tsvina inogona Dzinoshingisa uye fadza, achiwedzera ndamboita kuti ukama hwenyu.
7 Tips Nokuti Romantic Relationship
Mutumwa rudo pasuo renyu? Uri mumwe rombo…
Maererano nokumwe kuongorora kwakaitwa 2012, 41% michato rokutanga, 60% Wanano uye 73%…
Chii shamwari vaviri havana kuziva kwaiva kuti paiva chakavanzika Mary uye…